China Aluminium Parts ụlọ ọrụ na-emepụta | Ebute ụzọ
Ọ bụrụ na ị nwere akụkụ aluminium kwesịrị ịkpụzi, anyị bụ otu n'ime isi mmalite dị ike na ọnụ ọnụ, anyị nwere ike ịrụ ọrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Kedu uru nke aluminom, na nke alloy aluminom na-ewu ewu?
N'ihi na Aluminom nwere otutu ihe di iche iche di nma, ya mere o nwere otutu uzo di iche iche.
1.Aluminium njupụta dị obere, naanị 2.7 g / cm, ọ bụ ezie na ọ dị nro, mana enwere ike ịme aluminom dị iche iche, dịka aluminom siri ike, nnukwu ike aluminom, nchara aluminom, ihe nkedo aluminom na ihe ndị ọzọ. A na-eji alloys ndị a eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ụgbọ elu, ụgbọ ala, ụgbọ oloko, ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụpụta ihe. Na mgbakwunye, rọketi eluigwe na ala, mgbagharị oghere, satellites na-ejikwa ọtụtụ aluminom na aluminom arụ ọrụ.
2.Aluminium bu ezigbo onye ndu nke okpomoku, ihe omuma ya nwere okpukpu ato karia ígwè, enwere ike iji ya mee otutu ndi na-ekpo oku, ihe ndi ozo na ihe ndi ozo.
3.Aluminom nwere ductility ka nma, na 100 ℃ ~ 150 ℃ enwere ike ime alumini alumini di nma karia 0.01mm. Ndị a aluminum foil na ọtụtụ-eji nkwakọ sịga, swiiti, wdg, ọ nwekwara ike mere nke aluminom waya, aluminum warara, na mny iche iche nke aluminom ngwaahịa.
4.Mkpụrụ nke aluminom nwere nnukwu ihe nkiri oxide na-echebe, nke na-enweghị ike ibibi ya. N'ihi ya, a na-ejikarị ya eme ihe ndị na-emepụta kemịkal, ngwaọrụ ọgwụ, ngwa nju oyi, osisi na-anụcha mmanụ, pipeline mmanụ na gas.
Offọdụ n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu na alloys na-eso:
Aluminom 2024, 5052, 6061, 6063, 7075
Kedu Ihe Ngwa Aluminom Na-ejikarị Eme?
A na-ejikarị ngwongwo Aluminium eme ihe maka akụkụ akpaaka, akụkụ ụgbọ elu, akụkụ akụrụngwa ahụike, akụkụ elektrọnik, akụkụ arịa ụlọ na ngwa ndị ọzọ
Akụ ụgbọ elu
Nke gara aga: Staniless Steel Parts
Osote: CNC igwe